Imidlalo yobugqila bezinceku zobugqila: i-kink yenyama ethe xaxa - imidlalo yobulili yezigqila
Imidlalo yobulili yezigqila Buyekeza
Mr. Porn Geek > Imidlalo Yezithombe zocansi e-XXX > Imidlalo yobulili yezigqila
Isibuyekezo sikaMrporngeek kwimidlalo yezocansi yezigqila
Ngingahle ngingabi ngumuntu okhubazekile futhi ophendukezelwe kakhulu emhlabeni, kodwa uma kukhulunywa ngamathoyizi amangalisayo abantu emhlabeni we-bdsm abawasebenzisayo, imayelana nokubuka. Lesi ngesinye sezizathu eziningi zokuthi ngijabule kakhulu imidlalo ye-porn ye- bdsm . Ngenkathi ama-movie we-porn we-bdsm ethandeka, angihlangani ngendlela efanayo engiyenza kweminye yale midlalo. Ngiyakuthanda ukukwazi ukukhetha ukuthi yikuphi ukusebenzisa okujabulisayo nokungenangqondo ongakusebenzisa okulandelayo, noma ngabe kuyisitshalo, i-paddle, noma i-dildo. Sekukonke, akukhona ukukhetha kuphela okungidonsela emidlalweni yobulili engcolile, noma kunjalo. Izithombe ezikule midlalo ephezulu zihle kakhulu. Ngezilinganiso zomzimba eziphelele, ama-tiles amangalisayo, izimbongolo ezinhle, nobuntu obuhle ukufana, kukhona amathani ezinzuzo. Akuwona wonke amawebhusayithi omdlalo adalwe ngokulingana, noma kunjalo. Namuhla isiza esinenhlanhla yimidlalo yezocansi yezigqila.
Iyini imidlalo yobulili yezigqila?
Njengoba kungenzeka ukuthi ubuqagele, imidlalo yezigqila zocansi akuyona indawo ejwayelekile yomdlalo wezocansi obonisa zonke izinhlobo zomdlalo. Izinto lapha zingena ngokwedlulele, futhi lokho kuhle kimi. Phela, ukuba nabantu abazokufeza konke okuyimfezi yakho yezocansi futhi bakwenze kahle okushoyo kuyashisa njengesihogo. Eminingi yale midlalo inezindikimba ezithile, ezikuvumela ukuthi wakhe isipiliyoni sakho nokubuswa kwezinhlamvu ezi-sexy ezifakiwe. Ngakolunye uhlangothi, eminye imidlalo ibeka abadlali njengezinhlamvu ezifuna ukuphathwa futhi zibheke ukuzuza indawo yazo ekhaya. Kunezinamba ezinkulu zama-kinks nezintethe, ngakho-ke ngizoxhumana ezithombeni ezimbalwa ezahlukahlukene ezitholakala kule midlalo. Kunama-kinks amaningi kakhulu kanye nama-fetlings okufanele abhalwe lapha, kepha ake sibheke ezinye ezithandwa kakhulu.
Imidlalo yocansi yabesifazane
Abantu besifazane basanda kakhulu abantu abanemibono nezilokazana emphakathini we-bdsm. Kunamadoda azithobayo kakhulu ngaphandle kwalapho kunamadoda amakhulu, abesifazane abazithobayo nabesifazane ababazekayo. Lokhu kudala umgodi omncane uma kukhulunywa ngamadoda azithobayo athola ubukhosi abawufunayo. Imidlalo ye-porn yesifazane iyindlela enhle yokuhlola le nhloso uma unayo, nokuthola izigcawu zocansi ezinzima, kanye nezigcawu zokubusa ezingabandakanyi ucansi, ukuzivula. Eminye yale midlalo inezici zokufundisa lapho abantu bangafunda futhi babone izikhundla ezihlukile ze-bdsm zokuhlonishwa. Ngaphandle kwalapho, abesifazane abahamba nge-latex nesikhumba bahle kakhulu futhi bazothola lelo gazi eligelezela kwiqhude lakho ngokushesha.
Amandla okushintshanisa imidlalo ye-porn
Ngokungeziwe emidlalweni lapho kunamandla khona owesimame, ungathola nemidlalo lapho ubuntu obuvelele khona. Noma ngabe ufuna ukulawula ukushisa kwentsha okungu-18+, ama-twinks, noma abantu bakwezinye ubudala nezinhlobo zomzimba, ukukhethwa kwezihloko zocansi kule webhusayithi ukwambisile. Eminye yale midlalo ifaka amasu nezindlela zokuqeqesha ozithobayo, kanti eminye kakhulu ngokobulili ngokwemvelo futhi ifaka ukuphathwa kwabantu abaningi abahlukene ngokuhamba kwesikhathi. Vele, eminye imidlalo iyinhlanganisela yalezi zinto ezimbili, ngakho-ke, qhubeka ungene ungene futhi uthole imidlalo yakho oyithandayo ye-bdsm manje.
unyawo fetish imidlalo porn
Njengoba ama-bdsm athandwa kakhulu elanda laphaya, abantu abanezinyawo ezinyaweni bangagculiswa ngezihloko zocansi emidlalweni yezocansi yezigqila. Hhayi lokho kuphela kodwa ngoba lo mbungu uthandwa kakhulu, kunezindawo eziningi zezinwele ezingcolile ze-porn kanye nezigcawu zomdlalo onzima emidlalweni engenakho lokhu kugxilwe ngokuqondile. Kwesinye isikhathi izinyawo zigxila kuzo zonke izigcawu ze-porn, futhi kwezinye izikhathi zivele zibonakale lapha nalaphaya kubantu ababukayo. Noma iyiphi indlela, imidlalo emidlalweni yezocansi yezigqila inesethulo esiqinile sabantu abathanda lo mbungu, kanye nabanye abaningi.
Ukugqilazwa imidlalo ye-porn
Ifenisha yezocansi iyamangalisa, kanti nengqondo yokuboshwa noma ukunamathiselwa kuyo ivame kakhulu. Kulokho engikuqondayo, abantu abaningi bayayijabulela le fetish ngoba ibaphoqa ukuthi behlise ijubane, baphumule futhi bazizwe bejabule. Kumele ngivume ukuthi isici sokubuswa kufanele sibe yingxenye yaso. Engikwaziyo ukuthi uma benginethuba lokuboshwa phansi ngamanye ama-sms we-bdsm kule midlalo, bengizogibela lelo thuba. Lamachwane anezingubo eziphelele zemizimba yawo, ngasikhathi sinye. Indlela imilomo yabo ezigoqa ngayo amathumbu namaphaphu okukhotha ukuphelela, futhi besakaza imilenze yabo ngobumnandi kaningi. I-shibari ibuye inhle, futhi ngomdlalo obanzi we-hentai we-porn kusayithi, ungazibonela ngokwakho lezi zinto.
Imidlalo yobugqila yama-porn
Kukhona amathani emidlalo ye-hentai yezigqila lapha emboza konke okuhle okumnandi okwaziwa ngabantu. Ngibone ama-movie amaningi amahle kakhulu we-porn laphaya, futhi ngabuyekeza izingosi zewebhu zewebhu ezinhle kakhulu. Imidlalo ecacile ihlukile futhi inikeza izinketho eziningi zokushaya indlwabu. Ukuzulazula kwewebhusayithi emidlalweni yezigqila zocansi kungaba ngcono kancane, kepha empeleni azikho izinto eziningi ezimbi esizeni. Imidlalo embalwa akuzona izinto engingacabanga ukuthi zihlobene ne-bdsm, kepha ngizwa sengathi wonke umuntu unamazinga abo wangaphambilini nge-kink, futhi le midlalo ethile ingaba yinkinky kakhulu kwabanye abantu. Futhi, isiza sidinga ukuqinisekiswa kweminyaka, futhi abanye abantu bangahle bangafuni ukunikeza inombolo yabo yekhadi lesikweletu ukuze baqinisekiswe nayo. Noma iyiphi indlela, ukugcina i-porn ukuthi ingabukwa ngabantu abangafanele yinto enhle, ngakho-ke ngizwa sengathi kufanelekile ngomzuzu owengeziwe wesikhathi sami ukuze ngiqinisekiswe. Funda njalo ukuphrinta okuncane.
Ukubuka izigqila zocansi ngezigqila
Le webhusayithi inezinhlobonhlobo zamakhulu nezinkulungwane zemidlalo yezigqila ze-hentai etholakalayo. Eminye imidlalo ingcono kuneminye, futhi jikelele kunamaphesenti aphezulu emidlalo emihle efakiwe. Lokhu kungenye yalawo mawebhusayithi abantu abathanda ama-bdsm, ucansi lwe-kinky, ukushintshana kwamandla, nezithombe ezinhle kakhulu. Nemidlalo yokugqwayiza ye-japanese kanye nezinye izinhlobo eziningi zezithombe, amageyimu wokwenza ubulili ngezigqila athi kinky futhi ikwenza kahle.
Imidlalo ye-porn ye-BDSM
imidlalo yeBonus yezocansi ifakiwe
Akuyona yonke imidlalo ye-BDSM
Vakashela Imidlalo yobulili yezigqila